Waxgaradka Taleeh oo eedeeyay Soomaaliland. - BBC Somali
Waxgaradka Taleeh oo eedeeyay Soomaaliland.
Wasiirka madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo hoggaaminayay wafdi ka socda Somaliland ayaa dhawaan gaaray magaalada Taleex.
Booqashada kaddib ayaa wasiirku waxa uu u waramay BBC-da, waxa uuna sheegay in halkaasi ay u tageen in ay adkeeyaan maamulka halkaasi ka jira isla markaana dhex dhexaadiyaan labo beelood oo halkaasi isku dagaashay.
Balse wareysigaasi ayaa waxaa ka carooday qaar ka mid ah waxgaradka magaaladaasi Taleex oo iyagu ku eedeeyay Somaliland in ay caburinayso shacabka halkaasi dega.
Bashiir Maxamed Cabdi, waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaaladaasi, waxa uuna isaga oo joogo Taleex uu qadka taleefoonka ugu waramay Xasan Cali Geele oo ugu horreynti weydiiyay waxa ay ka cabanayaan.